सहकारी क्षेत्रमा तरलताको अवस्था «
सहकारी क्षेत्रमा तरलताको अवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भएसँगै त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको छ । वित्तीय पहुँचमा एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने सहकारीमा कारोबार पनि बढ्दै गइरहेको छ । तर, यो क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । प्रभावकारी नियमनको अभावमा संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने, सदस्यको बचत नै जोखिममा पर्ने जस्ता घटना पनि हुने गरेका छन् । अहिले तरलताको समस्या बढ्दै जाँदा सहकारी संस्थाहरूमा समस्या हुने र सदस्यको बचत नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । यो अवस्थामा सहकारीमा तरलताको स्थिति र ब्याजदरमा केन्द्रित रही केही सहकारीकर्मीसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
तरलताको अभाव पनि छैन, चाहेजति पनि छैन
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी
कोभिड–१९ ले पारेको असर बजारमा बल्ल देखिन थालेको छ, जसको कारण पैसाको चहलपहल कम हुन थाल्यो । बैंकहरूले सहकारीको सरह ब्याजदर दिएर निक्षेप उठाउन थाले । तर, सहकारीमा भने सन्दर्भ ब्याजदरको सीमाका कारणले ब्याजदर बढाउन सकिएको छैन । सहकारीबराबरको ब्याज बैंकमा नै पाउने भएपछि निक्षेप त्यतातिर आकर्षित हुने नै भयो । किनकि बैंक सहकारीभन्दा बढी विश्वासनीय मानिने भएकाले ब्याज बढ्नेबित्तिकै सहकारी निक्षेप बैंकतिर जान थालेको हो ।
अहिले एकातिर सहकारीको बचत संकलन घटिरहेको र अर्कातिर गरिसकेको लगानी पनि फिर्ता हुने अवस्था नभएकाले सहकारी क्षेत्रमा तरलताको समस्या भएको छ । एकातिर सहकारी ब्याजदर बढाउन नसक्ने तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारीले दिने ब्याजदरमा नै निक्षेप उठाउने हुँदा सहकारी क्षेत्रमा तरलताको प्रत्यक्ष असर परेको छ । हामीले पछिल्लो अवस्थामा लगानीलाई शतप्रतिशत रोकेका छैनौं, तर मागअनुसारको ठूलो लगानी भने गरेका छैनौं । साना–साना सदस्यको ऋणको माग भने पूरा गरेका छौं । अहिले सदस्यले तिरेको कर्जाको साँवा–ब्याजबाट नै हामीले कर्जाको माग पूरा गरिरहेका छौं । तरलताको ठूलो अभाव भने भएको छैन । तर चाहेजति पनि छैन ।
अहिलेको अवस्थामा सदस्यहरूलाई विश्वासमा लिएर लामो समयमको बचत लिइरहेका छौं । सदस्यहरूको बचत संस्थाबाट झिक्नेभन्दा पनि संस्थाको सदस्य भएको नाताले सपोर्ट गर्नका लागिसमेत आग्रह गरिरहेका छौं । संस्थामा भएको सदस्यहरूको बचत बचाइराख्नका लागिसमेत भइरहेका सदस्यहरूलाई १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएर राखेका छौं ।
अहिले तरलता अभावको समस्यामा सहकारीे संघहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर, संघहरूलाई व्यवस्थित तवरले अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ । यतिबेला सहकारी बैंकसँग र माथिल्लो निकायसँग हामीले आस गर्ने हो । तर, माथिल्लो निकायका पनि विभिन्न प्रकारका नकारात्मक हल्लाहरू बजारमा चलिरहेकै छन् । यो अवस्थामा हामी अरूबाट अपेक्षा गर्नेभन्दा पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई नै विश्वासमा लिएर उनीहरूसँगै बसेर आफू सस्टेन हुनतर्फ ध्यान दिएका छौं ।
सिद्धान्तमा चलेकालाई समस्या हुँदैन
अध्यक्ष, हिलटप जुनार बहुउद्देश्यीय सहकारी
सहकारीका सिद्धान्त, दर्शन तथा ऐन–कानुनअनुसार संस्था सञ्चालन गर्ने हो भने सहकारी कहिल्यै पनि समस्यामा नपर्ने क्षेत्र हो । किनकि सहकारी समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित संस्था हुन् । यसले धेरै सदस्यहरूसँग कारोबार गरेको हुन्छ । संस्थाले सदस्यको पहिचान गरेर कारोबार गर्ने भएकाले यसलाई अप्ठ्यारो पर्न लागेका सदस्यहरू मिलेर नै जोगाउँछन् । यो कहिल्यै पनि आपत्ति नआउने क्षेत्र हुनुपर्ने हो ।
तर सिद्धान्त, कानुनअनुसार सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन नहुँदा समस्या हुन्छ । सहकारी कानुनले भनेअनुसार कोष नराख्दा संस्थाहरू अप्ठेरो अवस्थामा पर्दा समस्या हुन सक्छ । अहिलेको तरलताको अभाव लामो समयसम्म जाने अवस्था देखिएकाले यसले भोलि अझ ठूलो समस्या ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।
अहिले सहकारी संस्थामा १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । त्यसको सेवाशुल्क जोड्दा ब्याजदर १५–१६ प्रतिशत पुग्छ । यो पनि उचो नै ब्याज हो । यो बेला सहकारी मन्त्रीबाट पनि ब्याजदर बढाउन सकिँदैन, बरु घटाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ । त्यसैले संस्थालाई हाइफाइ रूपमा चलाउनका लागि मात्र ब्याज बढाउनु हुँदैन ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको समस्या अझै केही समय रहने देखिन्छ । एक–डेढ महिना अझै लम्बिन सक्छ । यो अवस्थामा संस्थाहरूले सदस्यहरूको विश्वास जितेर काम गर्न सकेमा अप्ठेरो अवस्था हुँदैन । हुनत यहाँ नराम्रो कुरा छिटो फैलन्छ, राम्रो कुराको प्रचारप्रसार हँुदैन । एकाध संस्थाहरू बिग्रेका कारण अरू संस्थाहरूले पनि त्यो आरोप भोग्नुपरेको अवस्था छ ।
तर, मैले नेतृत्व गरेको प्रारम्भिक संस्थामा अहिलेसम्म बजारमा भएको हल्लाजस्तो तरलताको अभाव महसुस गरेका छैनौं । संस्थालाई सही ढंगले नीति विधि प्रविधिमा चलाएका छौं । त्यसैले हामी अहिलेको समस्या सजिलै थेग्छौं । तर बजारमा समस्या देखिँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा नै समस्या आएसँगै बजारको प्रभाव नपर्ला भन्न पनि सकिँदैन । बजारको अवस्थाले पनि संस्थालाई अप्ठेरो पार्न सक्छ । यो अवस्था आएको खण्डमा सदस्यलाई सुरक्षित गर्ने ढंगले लागेका छौं ।
बैंकको ब्याज दोहोरो अंकमा पुगेपछि सहकारीलाई दबाब
कार्यकारी प्रमुख, मुनाल बचत तथा ऋण
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगसँगै सहकारी संस्थाहरूलाई पनि तरलताको अभाव भइरहेको छ । हिजो जुन हिसाबले सहकारी संस्थाहरूका बचत संकलन हुन्थ्यो, अहिले त्यो रूपमा भइरहेको छैन । यसैगरी संस्थाहरूको ऋण असुलीमा पनि प्रभाव परेकै छ ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको ब्याजदर १० प्रतिशत भने पनि ११–१२ प्रतिशतसम्म दिएका छन् । त्यो अफर सहकारी संस्थाहरूलाई पनि आएको छ । त्यसैगरी अहिले सहकारी संस्थाहरूले आवधिक बचतमा मासिक ब्याजदर प्रायः भुक्तानी गर्दैनन् । तर, बैंकहरूले आवधिक बचतमा मासिक ब्याजदर भुक्तानी गरेको पनि सुनिन्छ । यस्तै बैंकहरूले बचत खातालाई मुद्दती मानेर पनि ब्याज दिएका छन् । जसका कारण बिस्तारै सदस्यहरू बैंकतिर आकर्षित भइरहेका छन् ।
हुनत बैंकको ब्याजदरभन्दा सहकारीमा २–३ प्रतिशत बढी नै छ । तर, यो मार्जिनमा सर्वसाधारण आकर्षित हुँदैनन् । किनकि सुरक्षाको हिसाबले पनि सहकारीभन्दा बैंक राम्रो हो भन्ने बुझाइ छ । बैंकको पैसा डुब्दैन, राष्ट्र बैंक ब्याकअपमा छ भन्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।
हिजो बैंकहरूको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा भएसम्म सहकारी संस्थाहरूलाई सहज अवस्था थियो । जब बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन थाले, त्यसपछि हामीलाई दबाब भएको हो । बैंकहरूको भन्दा १–२ प्रतिशत बढी ब्याज दिएर सहकारीमा ठूलो पैसा आउँदैन । ससानो बचत मात्र संकलन गर्दा त्यो पैसा आज आउने भोलि फिर्ता हुने किसिमको हुन्छ । यो अवस्थामा हामीले ब्याज बढाउन सकेका छैनौं । १४.७५ प्रतिशत अधिकतम ब्याजदर र १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । अहिले १३ प्रतिशतमा निक्षेप लिँदा पनि सञ्चालन खर्च जोड्दा त्यसको लागत १५ प्रतिशत पुग्छ । त्यसैले यो अवस्थामा सहकारीहरूको सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन आवश्यक छ ।
अहिले बैंकहरूमा तरलताको अभाव हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गरिरहेको छ । स्थानीय तहको बचत पनि बैंक मात्र राख्ने व्यवस्था छ । यो समयमा सहकारीलाई तरलतामा सहजीकरण गर्ने आधार भनेको सरकारले सहकारी बैंकलाई पैसा दिने र त्यसमार्फत सस्तो ब्याजदरमा संस्थाहरूलाई लगानी गर्ने नै हो ।
अहिलेको अवस्थामा हामीले अत्यावश्यक बाहेकका ऋण लगानी रोकेका छौं । सदस्यहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका छौं । उहाँहरूलाई पनि अत्यावश्यक परेमा मात्र निक्षेप झिक्नुहोस् भनेका छौं । यसैगरी भोलि तरलताको अवस्थामा सजिलो होस् भनेर सहकारी बैंक र नेफ्स्कून कर्जा स्वीकृत गरेर पनि राखेका छौं । संस्थामा १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म तरलता राखेर बसेका छौं ।
कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक छ
अध्यक्ष, उपासना महिला बचत तथा ऋण
अहिले बजारमा तरलताको समस्या भइरहेका बेला हामी सबै ब्याजदरको विषयमा अल्झिरहेका छौं । ब्याजदरको विषयमा यति धेरै बहस गरिरहेका छौं । तर, ब्याजदरभन्दा पनि सहकारीका लागि ठूलो समस्या भनेको कर्जा सूचना केन्द्र हो । कर्जा सूचना केन्द्रको अभावमा गलत नियत भएका एउटै व्यक्तिले पनि धेरै सहकारीबाट ऋण लिएर बदमासी गरेको पाएका छौं ।
सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्छु भनेर लागेको सहकारी विभाग किन यति संवेदनशील विषयमा मौन छ । कुनै एउटा सहकारीले ऋण लगानी गर्नुअघि त्यो सदस्यको अवस्था के हो ? के–कति ठाउँबाट ऋण लिएको छ ? उसको तिर्ने क्षमता छ या छैन भन्ने विषयमा संस्थाले कहाँबाट सूचना पाउने ? त्यो सूचना पाउने ठाउँ, प्रणाली कहाँ छ ? सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था राखेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी लबिङ गरिरहेका छौं, तर नियामकले यतातिर ध्यान नै दिएको पाइँदैन ।
अहिले सहकारीहरूको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको छ । स्थानीय तहमा सहकारीको अधिकार भएपछि कतिपय नगरपालिकाहरूमा अन्धाधुन्ध बहुउद्देश्यीयलगायत विषयगत सहकारीहरूको दर्ता भइरहेको छ । संस्थाहरूको नियमन हुन सकेको छैन, आफूखुसी सञ्चालन भएका छन् । विषयअनुसार संस्था सञ्चालन भए–नभएको भन्ने विषयमा दर्ता गर्ने निकाय नै बेखबर छ । एउटा बच्चालाई जन्मेदेखि नै बाटो देखाउन सकेनौं भने त्यो बिग्रन्छ । विषयअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न नसके बिग्रन्छ । त्यसैले नीतिगत रूपमै व्यवस्थित गरेर सहकारीलाई लैजान नसके दुर्घटना निम्त्याउँछ ।
मैले नेतृत्व गरेको उपासना महिला सहकारी संस्था सदस्यमा आधारित सहकारी भएको कारणले अहिलेको तरलता संकटको अवस्थामा हामीलाई त्यति धेरै अप्ठेरो छैन । यो अवस्थामा पनि गत वर्षको वित्तीय विवरण तुलना गर्दा हाम्रो कारोबार बढेकै छ । संस्थामा तरलता संकट पनि छैन । तर, यो अवस्थामा आफूमात्र सक्षम भएर भएन । बजारको अवस्था हेरेर आफूलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले एकदमै संयमित भएर लगानी गरिरहेका छौं । सदस्यहरूलाई एकदमै अप्ठेरो परेको अवस्थामा धितोमा लगानी गरिरहेका छौं ।
हामीकहाँ सदस्यहरूको अनिवार्य नियमित बचत रहेको छ । त्यो हाम्रो संस्थाको ब्याकअप हो, जसले गर्दा तरलता व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ । तरलता समस्याका कारण संस्था अप्ठेरोमा पर्दैन भन्नेमा ढुक्क छौं ।
नियमित बचत सहकारीको आधार हो
कार्यकारी प्रमुख, मातृशक्ति बचत तथा ऋण सहकारी
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएपछि त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको छ । अहिले हाम्रो पनि बचत संकलन घट्दै जान थालेको छ । जसका कारण सदस्यहरूले मागेअनुसार ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन । ठूलो–ठूलो ऋण लगानी रोक्नुपरेको अवस्थामा छौं । हिजो हामीलाई ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहकारीलाई ऋण दिएका छैनन् । भर्खरै हामीले एउटा सदस्यलाई हामी केही लगानी गर्छौं, केही लगानी तपाईंहरूले गर्नुहोस् भन्दा पनि बैंकबाट अहिले लगानी गर्न नसक्ने कुरा आयो । उनीहरूले ऋण दिन सकेनन् ।
ठूलो–ठूलो लगानी रोक्नुपरे पनि सदस्यहरूलाई स–सानो लगानी गरिरहेका छौं । हामीसँग सदस्यहरूबाट संकलन भएको पुँजी र बचत पनि छ । त्यही रकम परिचालन गरेर भए पनि संस्था सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामीले धितो राखेर दिन ठूलो रकम लगानी गर्न सकेका छैनौं । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत निक्षेप माग्न आउनुभएको छ । बैंकहरूले पनि आफ्नो निक्षेप बढाउनका लागि सहकारी संस्थाहरूलाई टार्गेट गर्नुभएको छ । बैंकहरूले सहकारीबाट पनि निक्षेप लैजाने अवस्था आएको छ । किनकि अहिले बैंकहरूले नै १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर दिएको अवस्था छ । अहिले पनि हामीकहाँ सर्वसाधारणहरूलाई बैंकभन्दा सहकारी नै सुरक्षित छ भन्ने मानसिकता पनि छ । केही सहकारीहरूको बदमासीका कारण अरू सहकारीहरू पनि बदनाम भएका छन्, जसले गर्दा हामीलाई सदस्यहरूको विश्वास जित्न गाह्रो भएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकले ब्याज बढाए पनि हामीले ब्याज बढाउन सकेका छैनौं । सदस्यहरूलाई प्रतिस्पर्धी ब्याज दिएर निक्षेप संस्थामै राख्न सकेका छैनौं । बैंकहरूले सहकारीको पैसा पनि तान्नका लागि बढी ब्याज दिएको अवस्था पनि छ । यो बेला सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरका कारण हामीले ब्याजदर बढाउन सकेका छैनौं । सन्दर्भ ब्याजदर खुकुलो बनाए हामीलाई पनि ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाउन सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सरकारले पुँजी परिचालन गर्न नसकेका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको हामीले सुनेका छौं । यो अवस्था समाधान गर्नका लागि सरकारले पनि पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ ।
बजारको गतिलाई सहकारीले पनि पछ्याउनुपर्छ
अध्यक्ष, तीर्थ बचत तथा ऋण
तरलता अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीहरूलाई पनि ब्याज बढाउनैपर्ने दबाब छ । तर, ग्रामीण भेगमा समुदायमा आधारित रही काम गरिरहेका सहकारीहरूलाई ब्याजदर बढे पनि खासै असर गर्दैन । तर सहर केन्द्रित सहकारीहरूलाई भने बैंकहरूले नै निक्षेपमा दोहोरो अंकको ब्याज दिने क्रम लम्बियो भने असर पर्छ । अहिले सहकारीहरूमा निक्षेप संकलनको अनुपात केही घट्न थालेको छ । तरलता अभावको समस्या तत्काल समाधान भए त सहकारी क्षेत्रमा त्यस्तो देखिने गरी असर हुँदैन, अझै लामो समयसम्म गएमा भने असर पर्न सक्छ ।
अहिले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोकिरहेका छन् । त्यसैले यो बेला बजार जुन गतिमा गइरहेको छ त्यसलाई सहकारीले पनि पछ्याउनु जरुरी छ । बैंकहरूले कर्जामा लगाम लगाउनेबित्तिकै कर्जाको माग सहकारीमा बढिरहेको अवस्था पनि छ । यो बेला सहकारीहरूले गम्भीर भएर सोचेर लगानी गर्नुपर्छ । हामीले अत्यावश्यकभन्दा अन्यत्र लगानी गरेका छैनौं, लगानीमा नियन्त्रण गरिरहेका छौं ।
समुदायमा चलेका सहकारीहरूलाई ब्याजदरकै कारण ठूलो असर पर्दैन । किनकि ती संस्थाहरूले सदस्यलाई अन्य सेवा–सुविधा दिएका हुन्छन् । रकम राख्ने ब्याज पाउने मात्र होइन । जुन सहकारी सहर केन्द्रित छ र समुदायमा आधारित छैनन्, उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी असर नै ब्याजदरले गर्छ । किनकि उनीहरूका सदस्यहरू पनि संस्थाले दिने सुविधाको पछिभन्दा पनि ब्याजदरका पछि दौडने गरेका हुन्छन् । सहकारी संस्थासँग भावनात्मक सम्बन्ध भएका सदस्यहरूलाई ब्याजदरको कुनै महत्व हुँदैन ।
अहिले बजारमा तरलता अभावको समस्या लामो समय जाने देखिएको छ । हामीले त्यसका लागि बचत गर्ने बानी बसाल्नका लागि विभिन्न शिक्षाहरू दिने, कर्जा लिँदा आवश्यक कुरामा मात्र लिने बानी बसाल्ने गरी सदस्यहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्छ । त्यससँगै संघहरूले पनि अन्तरलगानीजस्ता कार्यक्रमहरूबाट स्रोत जुटाएर तरलता व्यवस्थापनका लागि काम गर्नुपर्छ । संस्थाहरूले सदस्यहरूलाई बचतका लागि प्रोत्साहन तथा उनीहरूको बचत सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी हुने गरी मेकानिजम बनाउन आवश्यक छ । संस्थाहरूले सदस्यहरूको आवश्यकता हेरेर कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । संदस्यहरूलाई आवश्यकता पर्दा बचत फिर्ता पनि गर्नुपर्छ ।
#मुनाल बचत तथा ऋण
#शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी
#हिलटप जुनार बहुउद्देश्यीय सहकारी